IMEI/MEID၊ SN သို့မဟုတ် MAC ကုဒ်များကို မည်သို့ စစ်ဆေးနိုင်သနည်း။
နည်းလမ်း 1။ ။
ကိရိယာကို ဖွင့်ထားပါက *#06# ကိုခေါ်ပြီး ရှာနိုင်ပါသည်။
နည်းလမ်း 2။ ။
ကိရိယာကို ဆက်တင် -> ဖုန်းအကြောင်း -> လက်ရှိအခြေအနေ သို့ဝင်ပြီး ရှာနိုင်ပါသည်။
နည်းလမ်း ၃။ ။
ဘက်ထရီကာဗာကို ဖြုတ်လို့ရပါက IMEI၊ SN ကုဒ် များကို ကျောဘက်လေဘယ်လ်တွင် ကြည့်ပါ။
နည်းလမ်း ၄။ ။
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုတွင် IMEI၊ SN ကုဒ်များကို ကြည့်ပါ
IMEI/SN ကုဒ်များကို ကိရိယာကျောအကာနောက်လေဘယ်လ်ပေါ်တွင် စစ်ဆေးပါ။
ကဒ်ထိုးပေါက် အတွင်း နှင့် အပြင်တွင် IMEI၊ SN ကုဒ်များကို ကြည့်ပါ။
(M စီးရီး၊ T စီးရီး တက်ဘလက်များတွင် သုံးနိုင်ပါသည်)
(ခေါ်ဆို ဗားရှင်းမှ တက်ဘလက်အတွက်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်)
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ S/N သည် စီးရီးနံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။
အန်းဒရွိုက်စနစ်။ ။ HUAWEI ဝတ်ဆင်နိုင်သော APP မူလစာမျက်နှာ ကို ဖွင့်ပါ > ဘယ်အပေါ်ထောင့်ရှိ အိုင်ကွန်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး ဘန်းဆက်တင်ထဲသို့ ဝင်ပါ > အောက်ဆုံးလိုင်းသည် Mac လိပ်စာ ဖြစ်ပါသည်။
IOS စနစ်။ ။ ဆက်တင်များ > အထွေထွေ > ကိရိယာအကြောင်း > HUAWEI B2 သို့ဝင်ပြီး MAC လိပ်စာဖြစ်သည့် "စီးရီး နံပါတ်" ကိုကြည့်ရန် ကလစ်ပါ။
1. အရွက်အတွင်းပိုင်းကို စစ်ဆေးပါ။ ဂဏန်းအလုံး 20 နံပါတ်သည် SN ဖြစ်ပါသည် (Honor band အတွက် ပါ)
2. ဘလူးတုခ်နားကြပ်၏နောက်ကို စစ်ဆေးပါ။ S/N သည် စီးရီးနံပါတ် ဖြစ်ပါသည် (B2 အတွက်ပါ)
3. SIM ကဒ်အကာကို စစ်ဆေးပါ။
4. နာရီကျောဘက်ကို စစ်ဆေးပါ။ (B0 အတွက်ပါ)
ကိရိယာ၏အောက်ရှိ အမည်ပြာပေါ်တွင် S/N နှင့် MAC လိပ်စာကိုကြည့်ပါ။
အရောင်ထုပ်ပိုးမှုတွင် S/N နှင့် MAC လိပ်စာကို ကြည့်ပါ။
ထိန်းသိမ်းစာမျက်နှာ။ ။ ထိန်းသိမ်းစာမျက်နှာ 192.168.3.1 ကို ဝင်ပါ -> ပိုများသော လုပ်ဆောင်မှုများ -> ရောက်တာ အခြေအနေ -> ရောက်တာအချက်အလက်။ ဤစာမျက်နှာပေါ် တွင် S/N နှင့် MAC လိပ်စာအပါအအဝင် ရောက်တာအချက်အလက်များကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Hilink APP ကို ဝင်ပြီး မူလစာမျက်နှာ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ ဂီယာပုံ ဆက်တင်ပေါ်တွင် ကလစ်လုပ်ပါ -> ကိရိယာ -> ကိရိယာအချက်အလက်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် S/N အပါအဝင် ရောက်တာအချက်အလက်များကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ကိရိယာ၏ အမည်ပြားပေါ်တွင် S/N နှင့် MAC လိပ်စာကို ကြည့်ပါ။
. SN ကို စစ်ဆေးရန်။ ။ ဆက်တင်များ -> အကြောင်း -> စနစ်
. MAC နံပါတ်ကို စစ်ဆေးရန်။ ။ ဆက်တင်များ -> အကြောင်း -> စနစ်
။ HUAWEI ဝတ်ဆင်နိုင်သော APP မူလစာမျက်နှာ ကို ဖွင့်ပါ > ဘယ်အပေါ်ထောင့်ရှိ အိုင်ကွန်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး ဘန်းဆက်တင်ထဲသို့ ဝင်ပါ > အောက်ဆုံးလိုင်းသည် Mac လိပ်စာ ဖြစ်ပါသည်။
။ ဆက်တင်များ > အထွေထွေ > ကိရိယာအကြောင်း > HUAWEI B2 သို့ဝင်ပြီး MAC လိပ်စာဖြစ်သည့် "စီးရီး နံပါတ်" ကိုကြည့်ရန် ကလစ်ပါ။
ကိရိယာ ကိုယ်ထည်ကို စစ်ဆေးပါ။
. MAC နံပါတ်ကို စစ်ဆေးရန်။ ။ ဆက်တင်များ -> အကြောင်း -> ကွန်ယက်
IMEI ကို ရှာဖွေမည်